Akụkọ - Nyocha nke batrị lithium na ụlọ ọrụ ụgbọ ala ọhụrụ
Batrị Li-ion / Batrị Pack
Ni-cd Battert / Batrị Pack
Ni-mh Battert / Batrị Pack
Nyocha nke batrị lithium na ụlọ ọrụ ụgbọ ala ọhụrụ
N'ihe banyere mmepe mmepe nke ugbo ala ohuru, erere ugbo ala elekere nde 2.2 n'uwa dum na 2019, mmụba nke 14.5% kwa afọ, na-echekwa 2.5% nke ire ere ụgbọ ala. Ka ọ dị ugbu a, n'ihe gbasara ire ahịa ụgbọ ala ọhụrụ, BYD bụ nke abụọ nke Tesla. N'ime afọ 19, Tesla rere 367820 ugbo ala eletrik, nke mbụ na ụwa, na-aza 16.6% nke ngụkọta ụwa.
China bụ onye na-emepụta ma na-erekwa ugbo ala ọhụrụ. Na 2019, China belatara enyemaka maka ụgbọ ala ọhụrụ. Onu ahia ahia nke ugbo ala ohuru bu 1.206 nde, gbadata 4% kwa afo, na-edeputa 4.68% nke onu ogugu uwa. N'ime ha, e nwere ihe dị ka ụgbọ ala eletrik 972000 na ụgbọ ala ngwakọ 232000.
Ọganihu siri ike nke ụgbọ ala ọhụrụ ike ọhụrụ kwalitere mmepe nke ụlọ ọrụ batrị lithium-ion. Mpaghara mbupu batrị lithium-ion rịrị elu site na 16.6% ma e jiri ya tụnyere afọ gara aga, na 116.6gwh na 2019.
Na 2019, etinyere batrị lithium 62.28gwh na China, elu 9.3% n'afọ na afọ. N’iche na mmepụta nke ụgbọ ala ike ọhụrụ ga-abụ 5.9 nde na 2025, ọchịchọ maka batrị ike ga-erute 330.6gwh, na CAGR ga-abawanye site na 32.1% site na 62.28gwh na 2019.
Post oge: Jul-09-2020
Okwu: 5-6 ala, Li Jia Industrial Park, Qiao tou, Dong guang, Guangdong, China
Na ọkara ọkara nke afọ, China prod ...
Ọnụ ego Cobalt arịgoro atụmanya ...
N'afọ gara aga, 11.0 GWH nke lithium batrị ụwa ...
EZI ike gara HK ngosi 12 Oct 2019.
Nyocha nke batrị lithium na energ ohuru ...
12v Lithium Ion Batrị na-akwụ ụgwọ, 12 Volt Rechargeable Lithium Batrị Pack, Li Batrị, 18650 Nimh, Batrị Lithium Ion Polymer, 3.7 Batrị na-akwụ ụgwọ, Ngwa niile